‘लभ यु हमेशा’को यो हावामा यशराज र ऋचा रोमान्टिक - StarPratika.com
‘लभ यु हमेशा’को यो हावामा यशराज र ऋचा रोमान्टिक
काठमाडौं, । प्रेमकथानकफिल्म‘लभ यु हमेशा’मा समाबेश यो हावाकिनचल्छबोलको गीतबुधबार सार्वजनीकगरिएको छ । मंसिर १३ गते प्रदर्शन हुने फिल्मको रोमान्टिकगीतमायशराज र ऋचाथापाफिचर छन् ।
भाष्कर प्रधानको लेखन र निर्देशनमायवन गुरुङले निर्माण गरेको फिल्मको सो गीत सुधीर राई र मेलिना राईले गाएकाहुन् । भासुको शब्द र संगीत रहेको गीतफिलिपिन्सको समुन्द्रीतटमाखिचिएको हो । रामजीलामीछानेले कोरियोग्राफी गरेको गीत प्रेमाभावले प्रेरित छ ।
कार्तिक १५ गतेबाटभारतको दार्जिलिङ,सिलगुढीलगायतका स्थानकाहलमा सफलताका साथप्रदर्शन भइरहेको फिल्मले स्वदेशमापनिदर्शकको मन जित्ने बिश्वास निर्मातायवनले ब्यक्त गरे । प्रेसमिटकार्यक्रममाअभिनेतायशराजले आफू यो फिल्मबाटनिकै आशावादी रहेको बताए । कार्यक्रममाउनले सुटिङकाक्रममाबिबिध रमाइलापलहरु सुनाएकाथिए । अभिनेताऋचाले पनिआफू यो फिल्मबाटठूलो आशा राखेको बताइन् । उनले दार्जिलिङ रिलिजमादर्शकले फिल्मनिकै मन पराएको प्रसंग उल्लेख गरिन् भने अर्की अभिनेत्रीफिजा योञ्जनले फिल्म हेरेका दर्शकले निकै राम्रो कमेन्ट गरेकाले खुशीलागेको बताइन् ।
फिल्मकाबितरक रिच इन्टरटेनमेन्टकाप्रमुख करणश्रेष्ठले ‘लभ यु हमेशा’प्रेम मन पराउने सबैका लागि सुन्दर फिल्म बनेको बताए । उनले आफूहरुले यो फिल्म धेरैभन्दा धेरै हलमाप्रदर्शन गर्न लागीपरेको सुनाए । शिबढकालले खिचेको फिल्ममायशराज गरच, ऋचा, फिजाका साथमागोपालढकाल (छन्दे), शिसिर राणा,करुणाश्रेष्ठ, निराजन मेहता, पिटी योल्मा,सल्देन तामाङ,प्रमीला राईलगायतकाकलाकारले अभिनय गरेका छन् ।भारतको कालेबुङ,सिलुगुढीतथाफिलिपिन्सकाबिभिन्न स्थानमाखिचिएको फिल्मकागीतमाकमल राई र रामजीको कोरियोग्राफी छ । मिलन गुरुङ सहनिर्माता रहेको फिल्ममंसिर १३ मा देशभरका हलका साथै भारतका केहीथपहलमाप्रदर्शन हुने जानकारी निर्मातायवनले दिएकाछन् ।
प्रकाशित मिति : 2019-11-20
अर्कै केटासँग विदेश जान लागेकी प्रेमिकाको हत्या
बोर्ड अध्यक्षमा अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीको उमेदवारी
यस्तो बन्यो धर्तिमाको आवाजमा पञ्चेबाजामा ’सोरठी देउसी भैलो ’ गीत
सुशिला थापाको अभिनयमा ‘ पर्खि बस है माया’ सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् भिडियो !
पत्रकार प्रकाश बराईली “अभिव्यक्ति” को निर्देशनमा फेरि आयो दशै तिहार । (भिडियो सहित)
‘सेल्फीकिङ्ग’पोष्टर र टिजरपछी निर्माण टिमले गीत सार्वजनिक